Linux Mint 20.3 inosvika paKisimusi ine webhusaiti nyowani | Linux Vakapindwa muropa
Zvaitarisirwa. Mushure mekuburitswa kweshanduro nyowani yeanoshanda system, vagadziri vayo vanozorora zvishoma. Clement Lefebvre nechikwata chake vakakanda vhezheni 20.2 yeMint kutanga kwaJuly, uye ikozvino inguva yekutanga kuronga inotevera. Iyo chinyorwa chemwedzi haipe ruzivo rwakawanda, asi kana chimwe chinhu icho isu tese taitarisira, icho chinotevera chikamu chichava Linux Mint 20.3 uye kana ichizoburitswa kanenge, iko pasina kushamisika futi.
Kunyangwe Mint inowanzo gadzira masisitimu ayo ekushandisa paLTS shanduro dzeUbuntu, inoburitsa vhezheni yega yega mwedzi mitanhatu. Inowanzozviita mwedzi yakati wandei mushure mekuburitswa kweCanonical, saka, zvakare kutarisa kune zvakapfuura, ivo vafambira mberi iyo Linux Mint 20.3. ichavhura paKisimusi 2021 icho chinhu chaive "chinozivikanwa."
Linux Mint 20.3 inofanirwa kusvika ino Kisimusi
Kana ini ndawedzera makotesheni imhaka yekuti chokwadi chekuti Linux Mint 20.3 chakarongerwa Kisimusi haivimbisi kuti ichasvika panguva iyoyo. 20.2 yakauya zvishoma zvishoma pane zvaitarisirwa nekuti paive nembugs dzakakomba dzaida kugadziriswa, uye izvo zvinogona kuitika mumashure megore rino futi.
Chimwe chakasarudzika chetsamba yemwedzi uno ndechekuti vari kushanda pane webhusaiti nyowani:
Mufananidzo: Linux Mint blog
Pakuburitswa webhusaiti yedu yazvino, zvaitaridzika kunge zvinoshamisa. Zvaive, vanhu vaizvida, asi zvaive muna 2008. Izvi zvaive makore gumi nematatu apfuura. Chinhu chekutanga vanhu vanoti kana vachichiona nhasi ndechekuti chinotaridzika kunge chekare uye chinyakare. Uye ivo vari kutaura chokwadi, ndizvozvo chaizvo, zvekare uye zvechinyakare.
Izvo zvakaitika kwavari ndizvo zvakajairika chinhu munyika: iwe unogadzira yazvino dhizaini inofungidzirwa, nguva inopfuura uye zvinoita kunge kubva muzana rapfuura. Iyo software yemukati uye ewebhu mapeji akachinja zvakanyanya mumakore gumi apfuura, saka Linux Mint inogona kuvhura iyo webhu inoenderana nekuburitswa kwe20.3.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Mint 20.3 inotanga kukura kwayo, uye ichasvika paKisimusi ine webhusaiti nyowani
Ciao, ini ndiri mushandisi weMint, iko zvino kwakabviswa Windows perchè volevo qualcosa di più semplice, uye ndinofara della scelta, così pure della notizia che verrà aggiornato. Speriamo che arrivi sechipo di natale.
Nhau dzakanaka kwazvo, mindi ndiyo nzira yandaifarira zvakanyanya, ingangove Kisimusi yakanaka kana chipo chemadzimambo ... chaive chinhu chaitodiwa papeji, tinovimba vanokurudzirwawo kuti vachinje maforamu ekutsigira, nekuti vachiri kutaridzika kunge vekare, zorin ini ndinogadziridza yako uye vanotarisa uye vanoshanda nenzira inoyevedza, ivo vane zvese zvakanyatsorayirwa uye nekuzvishongedza anotaridzika zvakanaka kwazvo, kwaziso
Ehezve, kuve kugoverwa mukati merondedzero yevatungamiriri, timu yeMint inofanirwa kuratidza izvo zvemazuva ano uye aesthetics iyo inotenderedza OS inotungamira, uye kana mushandisi mutsva kana institution akaona hurukuro yako pawebhu, zvinoreva OS yakabwinyiswa, nerutsigiro uye mukati meazvino zviyero. Ikoko vane connoisseurs yehama dzavo saZorin, Manjaro, Fedora, Ubuntu, OpenSUSE, pakati pevakawanda.